Mmetụta nke Semalt 3 Ezigbo Ndị Ntanetị Weebụ n'Ịntanet
The scrapers weebụ n'efu nyere aka inweta data ma tinye ya n'ụdị a pụrụ iji mee ihe. Enwere ike itinye ihe dị n'ime URL kpọmkwem na mpempe akwụkwọ ma nwee ike gbasaa oge n'ogo data. Site na ntanetị weebụ, a na-ejikọta data nchịkọta ma nakọtara n'ime data data ọhụrụ ma ọ bụ dị. Ndị ntanetị weebụ ntanetị n'efu bụ ihe dị mkpa maka mmalite ka ị ghara ịkwụ ụgwọ ọ bụla - oculus ray-ban round dobravel. Ọzọkwa, ụfọdụ ihe egwu dị iche iche mere nkwa iji nweta ohere weebụ na-emeghe ma na-enweghị ebubo ọ bụla.
Ọ bụ onye a ma ama na otu n'ime ndị ntanetị weebụ kachasị mma. Import.io kacha mara amara maka usoro igwe ojii ya, ndị ọrụ ga-agbakwunye agbakwunye ihe nchọgharị weebụ iji mee ka usoro a rụọ ọrụ. Ọ bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya na a pụrụ ịdabere na ya nke na-arụ ọrụ ma na-echekwa data dịka ụdị ụlọ akwụkwọ API. Maka ibe weebụ n'enweghị data, ọrụ a nwere ike iwunye ya datasets. Ọ na-enyekwa nnukwu nchekwa nchekwa data ma na-eme ka data gị dị mfe. Ịnwere ike ịgbakwunye data na nchekwa data dị ugbu a, ebe ọ dị n'ọbá akwụkwọ dị, ma ọ bụ nwere ike ikpokọta data na oge. Import.io bụ otu n'ime ndị na-enyocha weebụ weebụ kachasị mma dịka ọ dị ugbu a, ndị na-elekọta ya na ndị na-ahụ maka mmepe na-enwe ahụmahụ na ntanetị Intanet.
3. Scanper Wiki:
Dịka import.io, Scraper Wiki bụ ihe ntanetị weebụ n'ịntanetị na ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ. A na-edebe akaụntụ ntanetị n'efu ya maka ihe datasets ole na ole, ma nke kachasị elu ma ọ bụ ụgwọ a kwụrụ ụgwọ dị mma karịa ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime nhọrọ ya nwere ike ịnweta ụdị mbipute ahụ. Ụlọ ọrụ a emeela nkwa dị ogologo iji kwado ndị mmepe, ndị mmemme na ndị nta akụkọ site n'inye ọrụ n'efu. Ngwaọrụ a bara uru maka ma weebụsaịtị ma buru ibu ma chekwaa ọtụtụ data gị na PDF. Ọ pụtara na ọ dịghị gị mkpa itinye koodu ọ bụla iji nweta ihe kachasị mma na usoro a. Na nso nso a, Scraper Wiki emeela ihe ndị dị mkpa, na usoro mgbasa ozi ọhụrụ ma ọ bụ nke dị ugbu a amalitela na nhọrọ ndị dị oke mma ma dị egwu. Dị ka ọmụmaatụ, ngwá ọrụ a na-akwado asụsụ dị iche iche gụnyere Ruby, PHP, na Eke Ọgba. N'ụzọ dị iche, ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya adịghị akwado asụsụ ndị a niile n'otu oge ahụ. Ya mere anyị nwere ike ikwu na usoro nchịkọta data a dị mma karịa ihe ọ bụla ọzọ ntanetị weebụ.